Trump ayaa Georgia uga qeybgalay inuu u ololeeyo labo Senator oo doorasho ku celis ah… – Hagaag.com
Trump ayaa Georgia uga qeybgalay inuu u ololeeyo labo Senator oo doorasho ku celis ah…
Posted on 6 Diseembar 2020 by Admin in World // 0 Comments
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa booqday Sabtidii Shalay gobolka muhiimka ah ee Georgia si uu ugu ololeeyo laba Senator oo xisbiga Jamhuuriga ah kuwaas oo kuraas laba ah kula tartamaya xisbiga Dimoqoraadiga doorashada ku celiska ee bisha January, taas oo go’aamin doonta xisbiga sida aqlabiyadda leh u maamuli doona golaha Aqalka Sare ee Maraykanka billowga muddo xileedka Joe Biden.
Madaxaweyne ku xigeenkii hore Joe Biden ayaa si aan rasmi aheyn ugu guulaystay gobolka Georgia wax ka yar 12 kun oo cod oo kamid ah 5 milion oo usoo baxday inay codeeyaan, laakiin ololaha Trump ayaa Jimcihii xareeyay dacwad ka dhan ah natiijada doorashadii 3-da November ee gobolkaasi.
Trump oo ka tirsan Jahmhuuriga ayaa safarkiisa Georgia kusii wadanaya ololihiisa doorashada ee uu ku hor istaagayo guusha ninka Dimoqraadiga ah ee Biden ee gobolkaasi iyo gobollada kale ee udub dhexaadka ah natiijada doorashada qaranka ee Mareykanka.
Trump oo ugu yeeray Sabtidii Shalay gudoomiyaha gobolka Geargia Brian Kemp ayaa ka codsaday in golaha sharci dajinta ee gobolkaasi uu isugu yeero shir aan caadi aheyn oo ay ku diidayaan natiijadii codadka ee kasoo baxday Geargia ayna doortaan kuwa isaga taageeraya sida uu qoray wargeyska Washington Post, Aqalka cad ayaana diiday inuu faahfaahin ka bixiyo.
Xisbiga Jahmhuuriga ayaa u baahan hal kursi si ay usii heystaan aqlabiyadda ay ku maamulayaan Aqalka Senate-ka.
Senator David Perdue oo Jamhuuriga ka tirsan ayaa u baahan inuu kaga adkaado Jon Ossoff doorashada 5ta January ee Georgia, halka Senator Kelly Loeffler ay tahay iyaduna inay ku adkaato Raphael Warnock.
Haddii tirada labada xisbi ee xubnaha golaha Aqalka Sare ay noqdaan 50 iyo 50 markaas madaxweyne ku xigeenka la doortay ee Mareykanka Kamala Harris oo golaha shir gudoomin doonta ayaa codkeeda ku jabin doonta tirada isla eg ee labada xisbi, iyadoo 51 ku noqn doonta xisbigeeda Dimoqraadiga.